Short Stories Archives - Page 15 of 17 - Safal Stories
Home Short Stories पृष्ठ 15
कथा : हीराले भरिएको जमिन
हफिज, अफ्रिकी एउटा गाउँको किसान थियो । ऊ खुशी र सन्तुष्ट थियो । यस्तैमा एकदिन, हफिजकहाँ एकजना बुद्धिमान मान्छे आइपुग्यो । त्यो मान्छेले हीराको...
स्कुले जीवनमा सुस्त बालकको रुपमा परिचित भएतापनि संसारलाई आफ्नो खोजले हलाइदिएका महान वैज्ञानिक हुन्, अल्बर्ट आइन्स्टाइन। उनको त्यो सफलताले प्रेरित एकजना केटोले उनलाई सोध्यो,...
कथा : एक पाउण्ड नौनी
पाउरोटी निर्माता कम्पनीको मालिकले, एकजना किसानसंग दिनहुँ, एक पाउण्ड नौनी किन्थ्यो । किसानले ल्याउने नौनीको तौल, पूरा एक पाउण्ड हुन्छ कि हुँदैन ? थाहा...
सफलताको रहस्य के ?
एकजना युवकले, सुकरातसंग सफलताको रहस्य सोध्यो । सुकरातले भोलिपल्ट बिहान नदी किनारमा भेट्न बोलाए । भोलिपल्ट, पर्खिरहेको युवकलाई सुकरातले आफूसंगै पानीमा हिंडाए । पानी,...
सानै उमेरमा आफ्नो सपना पछ्याउन थालेकी केटी पेरीले आफ्नो पढाइलाई हाइ स्कुलबाटै छोडेर गायन करियरतर्फ समय दिन थालेकी हुन् । सन् २००१ मा उनको...
रोडपतिदेखी करोडपति बनेका गार्डनर
क्रिस गार्डनर सानो हुँदा नै उनका बाबु आमा छुट्टीएर आमाले अर्को बिहे गरिन् । त्यसपछि उनका सौतेला बाबुले उनी र उनकी आमालाई नराम्रो व्यवहार...
बेथनि हमिल्टन प्रसिद्ध सर्फ़र हुन् जसको बायाँ हात सार्कले खाइदिएको थियो । आठ वर्षको उमेर बाट नै प्रतियोगितामा भाग लिन थालेकी बेथनि हमिल्टन नौ...
1...1415161717 पृष्ठ 15